Sheekada filimka Fanney Khan: Anil iyo Aish sheeko aan si wacan loo diyaarin ayay la imaadeen – Filimside.net
Sheekada filimka Fanney Khan: Anil iyo Aish sheeko aan si wacan loo diyaarin ayay la imaadeen
August 7, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: August 7, 2018
Filimka Fanney Khan wuxuu dib u mideebay Anil Kapoor iyo Aishwarya Rai Bachchan oo isugu dambeesay 18-sano ka hor inay shaashada kasoo wada muuqdaan.
Jilaayaasha filimkan: Anil Kapoor, Rajkummar Rao, Aishwarya Rai Bachchan, Pihu Sand iyo Divya Dutta.
Muxuu ku wanaagsan yahay Fanney Khan: Halyee Anil Kapoor iyo bandhigiisa cajiibka badan iyo quruxda Aishwarya Rai.
Muxuu ku liitaa filimkan: Malahan sheeko 100% isku daba dhaceyso waxaana ka muuqato dayacaad badan.
Qiimeynta filimka Fanney Khan: 2/5 (Labo xidig)
Waqtiga Uu Soconaayo: 2-saac iyo 10-daqiiqo.
Fariinta Filimka Fanney Khan Oo Kooban: wuxuu ku saaban yahay aabo rabo gabadhiisa inuu riyadeeda u rumeeyo oo ah heesaa caan ah inay noqoto iyo dhibaatada uu la kulmaayo.
Prashant Sharma aka Fanney Khan (Anil Kapoor) wuxuu ahaan jiray shaqsi tiyaatarada Mumbai dadka ka madaaliyo heesana ka qaado balse shaqadiisa wuxuu iska dhaafaa markii gabadhiisa Lata (Pihu Sand) kaga baahato daryeel gaar ah iyo xanaaneyn joogto ah.
Lata (Pihu Sand) haatan waxay ku jirtaa da’da 20-aad waxayna rabtaa inay heesaa noqoto ayadoo taageero weyn u ah Baby Singh (Aishwarya Rai Bachchan) sidoo kalena jecel iyada camal inay noqoto halka aabaheed uu fanka iska hilmaamay kana shaqeeyo warshad wax soo saarto.
Lata (Pihu Sand) niyad jab iyo cuqdad ayay ka qaadeysaa barashada fanka iyo tartankiisa madaama lagu niyad jebinaayo miisaankeeda aadka u badan.
Aabo Fanney wuxuu go’aan ku gaaraa inuu gabadhiisa Lata (Pihu Sand) lacag u aruuriyo una maal galiyo Album heeso lagu soo caan bixinaayo, laakiin warshadii uu ka shaqeenayay waa la xiraa isagana dhaqaale ku filan oo uu ku rumeeyo gabadhiisa riyadeeda ma heesto.
Nasiib wanaag aabo Fanney Khan wuxuu noqonaa darawal taksiile ah (Tax Driver) ah wuxuuna maalin qaadaa gabadha heesaaga caanka ah ee laga dambeeyo sidoo kalena gabadhiisa jeceshahay Baby Singh (Aishwarya Rai Bachchan).
Fanney Khan halkii uu Baby Singh (Aishwarya Rai Bachchan) geen lahaa goobtii ay rabtay wuxuu sameenaa inuu cabitaanka sun suuxineyso ugu daro, kadibna wuxuu geenaa warshadii uu ka shaqeyn jiray oo cidlo ah ayadoo suuxsan!
Fanney Khan oo garab ka helaayo saaxiibkiis Adhir (Rajkummar Rao) waxay toos u af duubanayaan gabadha heesaaga caanka ah Baby Singh (Aishwarya Rai Bachchan) kadibna waxay wacayaan maamulaheeda Kakkad (Girish Kulkarni) ay ugu war galiyaan inay fanaanada caanka ah iyaga af duubteen.
Fanney Khan lacag ma weydiisanayo fanaanada uu af duubtay balse wuxuu ka rabaa gabadhiisa ay heesaa caan ah ka dhigto waana waxa xiga ee filimkan loo daawan doono, waxaa kaloo xiiso leh in Fanney saaxiibkiis Adhir (Rajkummar Rao) isagana uu jeclaanayo gabadha heesaaga ah ee u af duuban Baby Singh (Aishwarya Rai Bachchan).
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Fanney Khan: Filimkan sheeko ahaan si rasmi ah waxaa looga soo min guuriyay filimka Dutch-ka ah IEDEREEN BEROEMD aka EVERYBODY’S FAMOUS  laakiin sheeko ahaan qayta asalka ah ayaa wanaagsan oo fariintiisa kooban aadna loo diyaariyay.
Director Atul Manjrekar filimkan shaqo qabyo ah ayuu ka qabtay madaama muuqaalada qaar uu si wacan u sameeyay balse sida guud sheekada mashruucan si adag ma uusan isugu daba ridin waxaana ka muuqato dayacaad badan.
Maxaa Laga Yiri Bandhiga Jilaayaasha Filimkan: Anil Kapoor bandhig cajiib badan ayuu la yimid sidoo kalena waa ruuxda filimkan asigoo si wacan isugu xiraayo dhacdo walbo. Rajkummar Rao marnaba kuma niyad jebinaayo madaama jilaagan mashruuc walbo doorka laga siiyo si qurux badan kaga baxsado sidoo kalena Fanney Khan door wacan ayuu ka qaatay.
Inaba caadi ma ahan quruxda ay Aishwarya Rai Bachchan shaashada la timid balse doorkeeda caawiyaha ah ma adko inkastoo muuqaalada qaar ay si wacan kaga baxsatay.
Pihu Sand iyadana door dhib badan ayaa loo dhiibay weyna ka baxsatay gabadhaan sida ay muuqaalada dareenka ee qiirada badan sida ay u matashay.
Gunaanad: Fanney Khan sheekadiisa ma ahan mid maangal ah sidoo kalena dayacaad badan ayaa ka muuqato sida fariinta la isugu xiray taasina waxay sababtay in sida guud daawashada filimkan lagu caajisayo, kaliya muuqaalada qosolka leh iyo kuwa qiirada badan ayaa mashruucaan fariintiisa liidato loo daawan karaa.
Fadlan hoos kaga bogo goos gooska filimka Fanney Khan:
Waxaa Aqrisay 847
Waa Xiligii GYM-ka: Mira Kapoor , Waluscha De Sousa Iyo Jhanvi Kapoor Oo Sawiro Shidan Laga Soo Qabtay Xili Ay Jir Dhis Kujiraan (Gym)!! January 20, 2019
Lamaanayaal Waqti Isla Qaadanayaan: Tiger Shroff Iyo Disha Patani Oo La Arkay Iyagoo Wada Qadeenayaan (+Sawiro January 20, 2019
5 Atariisho Iyagoo Uur Leh Ayay Shaqadooda Duubista Iska Watayn January 20, 2019